Xiddiga kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho oo hal sabab darteed aan u doonayn inuu ku biiro Manchester United – Gool FM
(Barcelona) 21 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Barcelona, Philippe Coutinho ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday inuusan dooneynin inuu ku biiro Manchester United.
Coutinho ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxda Liverpool, laakiin waxaa jiray warar isdaba-joog ah oo ku saabsan ciyaaryahanka reer Brazil, kuwaasoo sheegayey inay u badan tahay inuu u dhaqaaqo naadiga ay xafiiltamaan kooxdiisii hore Reds ee Manchester United.
Shabakadda ciyaaraha ee Goal ayaa warinaysa in Barcelona ay diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada lagu doonayo kubad-sameeyahan kaasoo ku guuldarreystay inuu boos joogto ah ka helo safka hore ee tababare Ernesto Valverde.
Yeelkeede, Wargeysku waxa uu intaa ku daray in 26-sano jirkaan uu jeclaan lahaa in uusan ku laaban horyaalka Premier League sababo la xiriira qoyskiisa oo markii hore ku fashilmay inay saldhigtaan England.
Coutinho ayaa kaliya ku biiray Catalan bilowgii sanadkii hore ee 2018, waxaana wadar ahaan uu u dhaliyey 19 gool oo ka kala yimid 44 kulan oo uu ku soo bilowday safka hore iyo 19 kulan oo uu ka soo kacay kursiga keydka tartammada oo dhan.